Saribakoly rantsan-tànana. Saribakim-borona | Asa tanana
Saribakoly rantsan-tànana. Saribakoly vorona
Saribakoly na saribakoly rantsantanana ny ankizilahy sy ankizivavy dia tia mitantara ny tantarany, ny tantarany ary mamorona tontolo nofinofy. Anio dia hasehoko anao ireo vorona kely ireo. Mora dia haingana izy ireo ary haingana atao, ka hahagaga anao izany.
Tena ara-toekarena ity asa ity satria afaka mampiasa sombin-tsolika eva sisa tavela amin'ny asa teo aloha isika, io dia fomba iray hitehirizana sy hamerenana ireo fitaovana vita an-trano izay an-trano.
1 Fitaovana hanaovana saribakoly
2 Fomba fanao amin'ny fanaovana saribakoly
Fitaovana hanaovana saribakoly
Totohondry vita amin'ny fingotra Eva
Fomba fanao amin'ny fanaovana saribakoly
Miaraka amin'ny fanampian'ny zavatra boribory (nisafidy mpikapa cookie) na kompà aho manapaka faribolana roa amin'ny kapila eva manodidina ny 6 sm ary 9 sm ny savaivony.
Apetaho izy ireo ny iray eo ambonin'ilay iray hafa hamorona ny loha sy ny vatana.
Miaraka amin'ny fanampian'ny totohondry boribory dia manaova roa amin'ny faritra ambany amin'ny vatana hahafahana mametraka ny rantsan-tànanao avy eo.
4. Alao ny kapsula avy amin'ny muffins, aforeto amin'ny antsasany ary amboary ho elatra. Afatory amin'ny sisin'ny vatan'ilay vorona izy ireo.
5. Mametaka ny maso finday amin'ny endrik'ilay vorona kely.
6. Miaraka amin'ny sombin-tsiranoka eva voasary mamolavola ny vavanao ary apetaho eo ambanin'ny masony.
7. Mampiasà "tanana" na zavatra mitovy amin'izany amin'ny eva manaova crest ary ataovy ny pitsopitsony momba ny vavan'ny masontsika sy ny volomaso.
Vita ary efa ananantsika ny saribakoly rantsantanana, mety ho an'ireo ankizy kely ao an-trano. Ary tadidio fa afaka milalao amin'ny endrika sy loko ianao.
Manantena aho fa tianao izany ary raha izany dia aza adino ny mandefa sary amiko amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera misy ahy.
Mandrapihaona amin'ny hevitra manaraka. Veloma !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Saribakoly rantsan-tànana. Saribakoly vorona
Ahoana ny fomba fanaovana ballerina miaraka amin'ny tanimanga Fimo na polymer
Ahoana ny fomba hanaovana voninkazo baoritra sy Eva Gum